Top 10 Free ngwa iyi Android Videos ka Apple TV
1.1 Stream si PC
1.2 Stream si Mac
1.3 Stream si iOS Devices
1.4 Stream si gam akporo Devices
2. akwado Formats
2.1 Apple TV akwado Formats
4. tọghata Videos
3.1 tọghata MP4
3.2 tọghata Hulu
3.3 tọghata XviD / DivX
5. Play Videos
5.6 iPhoto ngosi mmịfe
Bụrụ na ị nwere iPhone 5 ma ọ bụ 6 na aka, Apple TV kwesịrị ịbụ NO.1 nhọrọ enuba videos nnukwu ihuenyo. Mgbe bụrụ na ị nwere Samsung ma ọ bụ Google Nexus na n'akpa uwe, ka ọ pụtara Apple TV na-abaghị uru n'ihi unu? Ọ bụghị n'ezie! Bụrụ na ị nwere Apple TV n'ụlọ, ị nwere ike enuba ọ bụla media faịlụ site na android ngwaọrụ nnukwu ihuenyo were were site na iji ụfọdụ na-akwado ka ndị na-esonụ top 10 gụgharia ngwa.
NDỤMỌDỤ: Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ihe ọmụma na-esi na-enwe mgbasa ozi na TV, lelee a ndu >>
1. AirSync: iTunes mmekọrịta & airplay
Ndị mmadụ nụrụ nke DoubleTwist ukwuu karịa AirSync, ọ bụ ezie AirSync bụ ihe mere ọrụ nwere ike enuba videos, foto na music n'etiti dị iche iche na nsọtụ. Mgbe download na wụnye DoubleTwist, pịa checkbox iji wụnye AirSync na airplay n'otu oge. Mgbe ahụ ị pụrụ enuba gị niile media faịlụ na android ntị ka Apple TV. Nke a "na airplay" a abụghị "Otu airplay" agbakwunyere na Apple TV, mgbe nke nwere yiri ọrụ. E nweghị ọtụtụ chọrọ maka nkwanye videos na foto, ma ọ bụrụ na ị chọrọ enuba music ka ụfọdụ WiFi Ọkà Okwu ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ Express, ọ na-achọ Android 4.1 ma ọ bụ elu os. Akụkụ ọzọ n'ihi na nke a ngwa, ọ na-akwado ka ewetara gị wireless iTunes mmekọrịta maka music, foto na DRM-free videos na gị Mac ma ọ bụ PC karịrị gị n'ụlọ WiFi netwọk.
Mgbe arụnyere AllCast, ị nwere ike enuba ihe niile i Android ka nnukwu ihuenyo kpọmkwem maka free, nke ahụ bụ otu n'ime ihe ndị mere ọtụtụ ndị hụrụ ya n'anya! Mgbe ọ na-esetịpụrụ ókè na Michael, na free version nke AllCast nwere a 5 nkeji ikiri ịgba na foto na vidiyo. Na-kwalite ka adịchaghị version wepụ ikiri ịgba. Ịchekwa maka nkwanye Obodo faịlụ ka TV, ọ nwere ike enuba vidiyo si na Dropbox ma ọ bụ Google Drive mgbe nbanye na akaụntụ Apple TV. Ọ na-ike na-akwado ndị ọzọ na-ewu ewu gụgharia ngwaọrụ dị ka Chromecast, Amazon Fire TV, Xbox 360, Xbox One, Roku, WDTV, Smart TV na ndị ọzọ na DLNA Renderers.
3. AppleTV airplay Media Player
Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke a na ngwa kere site ZappoTV, i nwere ike na-eche na ọ bụ nke Apple Inc. dị nnọọ ka oge mbụ m mara ya. AppleTV airplay Media Player bụghị nanị a dị ike mgbasa ozi ọkpụkpọ, nke nwere ike enuba photos, videos na music si gam akporo ka Apple TV were were, ọ bụ nakwa a media njikwa, nke na-akwado search, achọpụta ma jikwaa ndị mgbasa ozi faịlụ. Ihe bụ ihe ọzọ, o nwere ọtụtụ ebe si dị iche iche ọwa dị ka Video Pọdkastị, YouTube, SHOUTcast Internet wakporo, Facebook, Flickr na na. Nanị drawback bụ na ọ bụ naanị na-akwado-agbago airplay-nyeere receivers.
4. tosta Wụnyenụ DLNA UPnP Player
The free version nke tosta nwere ike enuba music, foto na vidiyo na Apple TV, Chromecast na DLNA Smart TV si android ngwaọrụ ozugbo. The pro version dere Media Server ọrụ, nke na-akwado iji strimụ online media faịlụ dị ka vidiyo na YouTube na Vimeo ka nnukwu ihuenyo. Ọ bụghị nanị na-akwado DLNA ọkọlọtọ, ọ bụ nakwa maka UPnP, nke pụtara ihe na-akwado gụgharia ngwaọrụ dị ka Hi-Fi: Denon, Yamaha, Onkyo, Harman / Kardon, Bose, Oppo na ndị ọzọ; Game consoles: Xbox, PlayStation (na Media Server); PC na Mac software: XBMC, foobar, Windows Media Player na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nnukwu atụmatụ a ngwa bụ ịchọpụta na jikọọ na ngwaọrụ ọ bụla n'okpuru otu netwọk-akpaghị aka. All ọrụ chọrọ ime bụ na-ahọrọ nri ihuenyo ị chọrọ na-egosipụta. iMediaShare na-eje ozi dị ka ndị kacha n'ime obodo, nke nwere ike atụgharị gị android ka njikwa, otú i nwere ike ịgbanwe olu, playback, ma ọ bụ ịgbanwee vidiyo na kensinammuo touchscreen mmegharị. Ịchekwa maka Apple TV, ọ na-akwado Xbox 360, Xbox One, efere Hopper na Smart TV.
Ọzọ android ngwa iji strimụ android videos ka Apple TV ka ndị na:
Ugbu a, i nwere 10 ngwa nwere ike enuba gị niile media faịlụ site na android ngwaọrụ Apple TV, ihe ma ọ bụrụ na ị chọrọ enuba Obodo faịlụ site na PC na-Apple TV? Tụlee iji Wondershare Video Converter Ultimate, nke agbakwunyere na Media Server, nke nwere ike enuba ọ bụla media faịlụ na PC na-Apple TV / Roku / Xbox / PS ozugbo. Download free ikpe version n'okpuru na-amalite na-agbalị ugbu a!
Olee otú iyi Video si Mac ka Apple TV
Olee otú iyi Video si iPhone / iPad / iPod ka Apple TV
Idozi Ndakọrịta Nsogbu maka Apple TV
Send na Anata Android ozi ederede site na Computer Mfe
Olee otú Download Spotify Android
Otú nyefee Data si Motorola ka Android
Olee otú Chọọ, Zoo na ngọngọ Facebook Ozi na Android
Top 6 Maps ngwa ọdịnala n'ihi Android ka Were ebe ọ bụla ị Chọrọ
Olee otú Mee WiFi ndabere na android ekwentị na Tablet Mfe
Easy ụzọ Nyefee Photos si LG ekwentị na kọmputa
Olee otú mmekọrịta Music ka Android si PC
> Resource> Android> Top 10 Free ngwa iyi Android Videos ka Apple TV